မိန်းကလေးတွေကြားရေပန်းစားနေတဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်အိုင်ဒီယာလေးများ – Trend.com.mm
Posted on September 8, 2017 by Wint
ဒီလိုပါပဲ.. မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဆံပင်ပုံစံဟာလည်း ယောက်ျားများစွာရဲ့
အမြင်ထဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဆံပင်ပုံစံစမတ်ကျနေရင်
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ကျေနပ်မယ်၊ ယုံကြည်မှုပိုရှိလာစေတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ဘယ်လိုဆံပင်ပုံစံမျိုးရွေးရမှန်းမသိဘဲ အခက်တွေ့နေကြတာရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆံပင်ဒီဇိုင်းနာ Larry Sims နဲ့ Matt Fugate တို့က
Selfie time on @hairbymelindak Who wantsafeature?? Tag #mondaypixietime I'll look at it today and tomorrow Also tag #BEEHASH
A post shared by CabeloCurto 🖤 Short Hair Style (@nothingbutpixies) on Jun 12, 2017 at 3:30pm PDT
တစ်ချို့က ဆံပင်အတို သိပ်မညှပ်ရဲကြပါဘူး။ မလိုက်ဖက်မှာကို စိုးရိမ်ကြ
ပါတယ်။ မျက်နှာသေးသွယ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ ညှပ်မယ်ဆိုရင်တော့
Goodnight I reaaaaallly love you guys 💋💋💋💋💋💋
A post shared by Olivia Culpo (@oliviaculpo) on Apr 7, 2016 at 8:34pm PDT
လိုက်လည်းညှပ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ မိန်းကလေးတိုင်းလိုလိုနဲ့ လိုက်
ဖက်ပါတယ်။ ဆံပင်အတိုက လူကိုနုပျိုသွားစေသလို ခေါင်းလျှော်၊ ခေါင်း
ခြောက်အောင်လုပ်တဲ့အခါလည်း အချိန်သိပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဆံပင်အတို
ကိုမှ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရောင်ထပ်တင်လိုက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
Thanks @lyndsayzmakeup for beatin this mug today… @courtneym_lopez & @shaewilbur are lucky to have you! 💋 imagine if I tried to do my own makeup?!? Disaster!!! Sorry I couldn't sit still. #ADD (that's not add + either)
A post shared by Charissa Thompson (@charissajthompson) on Apr 6, 2016 at 8:13pm PDT
ဒီပုံစံလည်း အထက်ပါပုံနဲ့သိပ်မခြားပါဘူး။ အခုဒီဇိုင်းက step ပုံစံဖြစ်ပြီး
ဆံပင်က ဂုတ်နဲ့နည်းနည်းကျော်ပါတယ်။ သူလည်း မျက်နှာသွယ်တဲ့လူနဲ့
သာ လိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုဆံပင်တစ်ပြေးတည်းနဲ့သာလိုက်ပြီး
step ညှပ်လိုက်ရင် မျက်နှာကျပုံနဲ့မလိုက်တော့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ညှပ်သင့်ပါတယ်။
Loving today's glam by @hungvanngo & @harryjoshhair 💄💄💄 @VictoriasSecret @Ed_Razek @elizabethsulcer @tinat2 @jeromeduran
A post shared by Lily Aldridge (@lilyaldridge) on Jun 9, 2015 at 12:41pm PDT
ရေလှိုင်းပုံစံ ဆံပင်အကောက်ကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းအသည်းစွဲပေါ့။
ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတာကြောင့် နေရောင်ထဲမှာဆို သိပ်လှပါတယ်။
Lindsay ❤️ #avedaartist #aveda #fringe #bangs #shag #shaghaircut #avedacolor #brunette #naturalbeauty #texturedhair #waves #avedamakeup #hairbrained #modernsalon #americansalon #bangstyle #hairdressersatheart #estitica #chicago #chicagohairstylist – – – – Huge thank you to @aveda for this incredible opportunity to shoot with the finest! Color by @jordynshipley Makeup by @kk_juut_makeup Model @lindsaybrecht …. assistance and laughs provided by @jgeason @ianmichaelblack @karanesvig @jolenemt @alimyanez @hair_by_olive_flip @shirleyhagel @tayhanson
A post shared by 𝐒𝐮𝐬𝐚𝐧 𝐅𝐨𝐫𝐝 (@susanfordhair) on Jul 21, 2017 at 5:25am PDT
ကိုရီးယား မင်းသမီးတွေအတော်များများ စမိတ်ပုံစံဆံပင်လေးတွေထားကြ
ပါတယ်။ ကြည့်လို့လည်းကောင်းသလို၊ ပိုနုသွားသလို ခံစားရပါတယ်။
စမိတ်ပုံစံဆံပင်ကလည်း မျက်နှာရွေးတာကြောင့် ညှပ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ဆံပင်ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်တာဖြစ်ဖြစ် (သို့) ဆံပင်အတုဝယ်ပြီး ခေါင်းမှာ
စမ်းစွပ်ကြည့်ပါ။ လိုက်ဖက်မှုရှိတယ်ဆိုမှ ညှပ်ပါ။
Weave Crush Wednesday. 💞 I just love some extensions, ya know?? I also clearly love some gold wire. ✨ #braidcation
A post shared by KRISTIN ESS HAIR • FOUNDER (@kristin_ess) on Jan 4, 2017 at 7:03pm PST
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ရှုပ်ပွနေတဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်လေးတွေဟာ
တစ်မျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိနေပြန်ပါတယ်။ ပွယောင်းယောင်း အမြင့်ဆံပင်အထုံး
လေးတွေ၊ ကျစ်ဆံမြှီးလေးတွေက သင့်ကိုပုံမှန်ထက် ဆန်းသစ်တဲ့အသွင်ကို
ဆောင်စေပါတယ်။ လည်ပင်းအပြဲနဲ့ ဆံပင်စုစည်းထားခြင်းဟာ မိန်းကလေး
တိုင်းရဲ့အဓိက ဆွဲဆောင်မှုပုံစံတစ်မျိုးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
A post shared by KRISTIN ESS HAIR • FOUNDER (@kristin_ess) on Jul 7, 2017 at 10:12am PDT
ဒါကတော့ ဆံပင်ကိုသိမ်းပြီိး ရိုးရိုးစုထုံးထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဆံပင်အရှည်ဆို ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုဆံပင်ကို အနိမ့်ပုံစံလေး စုစည်း
တောနက်ကြီးထဲ လူသားတစ်ယောက်တည်းရှင်သန်နေရပုံကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ”Jungle ” ရုပ်ရှင်
ဒေါသကြီးတာကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၆ခု